Tontolo Arabo Mamaly An’i Gingrich: “Raha Vahoaka Noforomporonina Fotsiny Ny Palestiniana, Ny Amerikana Izany …” · Global Voices teny Malagasy
Tontolo Arabo Mamaly An'i Gingrich: “Raha Vahoaka Noforomporonina Fotsiny Ny Palestiniana, Ny Amerikana Izany …”
Voadika ny 12 Desambra 2011 3:11 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, Português, عربي, Ελληνικά, srpski, বাংলা, polski, македонски, English
Vahoaka “noforomporonina” ny Palestiniana, izay te-hamotika an'i Israely, hoy ny mpirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena Amerikana Newt Gingrich. Ny fanamarihany, tao anaty tafatafa niarahana tamin'ny fantsom-pahitalavitra Jiosy, dia niteraka hatezerana sy rikoriko teo amin'ireo mpiondana aterineto manerana ny tontolo Arabo.
Ao amin'ny Twitter, ilay Saodiana Mohsen Al Mohsen dia maneho hevitra hoe:
@MolMoHsen: Newt Gingrich: Vahoaka ‘Noforomporonina’ ny Palestiniana [ary ireo Amerikana fotsy hoditra no voalohany indrindra fantatra ho nonina tao Etazonia]
Ilay Ejiptiana Zeinobia, ao amin'ny bilaoginy Egyptian Chronicles, dia mizara fomba fijery tahaka izay. Manoratra izy:
Araka ny teboka omena sy ny famaritan'i Gingerish ny atao hoe “vahoaka noforomporonina” dia tahaka izay ihany koa ny Amerikana, raha ny marina dia avy aminà andian'olona mpifindra monina izay tonga avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ry zareo mba honina ao amin'ny tany izay an'ireo Indiana sy nonenany efa ho 200 taona lasa izay !!
Evan Hill, mpamokatra ety anivon'ny aterineto ho an'ny Al Jazeera amin'ny teny Anglisy, ary monina ao Doha, Qatar, dia manamarika hoe:
@evanchill: MAnontany tena aho raha toa i Gingrich ka hanohana ihany koa ny hoe vahoaka “noforomporonina” tahaka izany ny Irakiana, Jordaniana, Siriana sy ny Libane
Ary i Anthony Permal, monina ao Dubai, Emira Arabo Mitambatra, dia mamaly hoe:
@anthonypermal: Ry Gingrich, lazainao hoe vahoaka noforomporonina i #Palestine. Ndao ary, na i Israely aza dia tsy nisy talohan'ny taona 1948 #justsaying
Mandritra izany, i Marc Lynch, izay nitsidika an'i Koety, dia mizara fanontaniana iray avy amin'ny gazety Koetiana, izay sahala amin'ny ifanontaniana any an-dalantsara rehetran'ny fitondrana any, manerana ny tontolo Arabo:
@abuaardvark: Fanontaniana voalohany avy amin'ny gazety Koetiana : Ahoana no hinoantsika an'i Etazonia raha toa i Gingrich aza mandà ny maha-izy azy ny Palestiniana?
Ary i Selin, Palestiniana iray, mivazivazy hoe :
@Selintellect: Tena misy marina ve izany Newt Gingrich izany? Ny tiako holazaina dia hoe, lazainy fa vahoaka noforomporonina ny Palestiniana. Ny anarany aza toa tahaka ny zavatra nofforonina avy amin'ny Harry Potter..
Nasser Ali Khasawneh, monina ao Dubai, Emira Arabo Mitambatra, dia efa nahazo tsindrimandry nialoha ny hoe :
@Nasserak: Raha i Newt Gingrich no tsara indrindra ananan'ny GOP azo atolotra, dia i Obama no handresy amin'ny fifidianana manerana ny tany, tsy mila manao fampielezan-kevitra akory!
Ny fifidianana izay ho filoham-pirenena hitondra ao Etazonia mandritra ny fe-potoam-pitondrana faha-57 dia hatao ny 6 Novambra 2012.
7 andro izayAmerika Avaratra